Maxkmadda Xalinta Khilaafaadka ee London oo ku xukuntay Djibouti inay bixiso $ 385 milyan oo doollar | Berberanews.com
Home WARARKA Maxkmadda Xalinta Khilaafaadka ee London oo ku xukuntay Djibouti inay bixiso $...
Maxkmadda Xalinta Khilaafaadka ee London oo ku xukuntay Djibouti inay bixiso $ 385 milyan oo doollar
London-(Berberanews)-Guddi fadhigoodi yahay London ayaa ku u xukuntay magdhow aad u weyn in ay dawladda Djibouti siiso shirkadda DP-World oo ku saabsan qabsashada xukuumadda Jabuuti ay kula wareegtay shaqada Terminalka koontiinarada ugu casrisan dalkaas oo ay gacanta ku haysay DP World.
Maxkamadda Xalinta Khilaafaadka Caalamiga ah ayaa amar kuriday Djibouti inay bixiso $ 385 milyan oo doollar (dh1.4 bilyan oo doolar) iyo dulsaarka jebinta heshiiska shirkaddu ku maamulaysay Doraleh Container Terminal (DCT).
Xukunka ayaa sheegaya in heshiiskii 2006 ay wada galeen uu yahay mid shaqaynaya oo aan waxba laga bedeli karin, inkasta oo xukuumadda Jabuuti ay la wareegtay terminaal bishii February kadib markii ay joojisay xaqii ay DP World u lahayd gacan ku haynta iyo maamulka sanadkii hore.
Go’aanka ayaa wuxuu siiyay DP World inay xaq u leedahay inay sheegato waxyeelo dheeraad ah haddii Jabuuti ay sii waddo qorshayaal lagu horumarinayo dekedda kontiinarada oo ay cid kale ka hawlgasho, aya alagu tidi xukunka.
Hawlwadeennada ayaa sheegay in ay ahayd xukunkii shanaad ee sharci ah oo kor u qaaday xuquuqda lahaanshaha ee ka dhanka ah xukuumadda Jabuuti tan iyo markii dagaalka gacan ku haynta dekeddu bilowday.
Maxkamadda Sare ee England iyo Wales ayaa laba jeer soo saartay amarro ka dhan ah qabsashada terminal sanadkii hore.
Dekadda waxaa horumarisay DP World waxaana uu ahaa albaabka ugu weyn ee ay ka gudbaan ganacsiga kontaynarrada ee Geeska Afrika, waxaanay dekeddu kaalin muhiim ah ga jirtaasoo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga Itoobiya.
Inkasta oo Jabuuti ay lahayd saddex-meelood laba qeybood saamiga Doraleh ah, laakiin dawladdu waxay qaramaysay dekedda ay gacanta ku haysay Dp World bishii Sebtembar ka dibna waxa ay tirtirtay heshiiskii.
Dawladda Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qorsheynaysay muddo ka badan toban sano si ay gacanta ugu dhigto ganacsiga kontaynarrada Jabuuti, taas oo ka mid ah hantida ganacsi ee kooban ee dalkaasu leeyahay.
Previous articleMa rumaysantahay in 11 milyan oo qof u dhintaan sannadkasta cuntada maalinlaha ah ee aynu quudanno?
Next articleGanacsade Axmed Cismaan Geelle oo markii u horraysay ka hadlay eedaha Djibouti u haysato